Sidee saxan ayaan Ilaahey ula socdaa?
Si markaas aan si “sax” ah ula socda Ilaahey, waa in marka hore aan fahamnaa waxa “qaldan.” Jawaabta waa dambi. “Ma jiro qof sameeyo wanaag, oo aan aheyn xitaa hal” (Sabuurada 14:3). Waan ku caasiyownay amarada Ilaahey; waxaan nahay “sida idaha, ulamay” (Ishacyaah 53:6).
Aqbaarta xun ayaa ah in ciqaabta dambiga ay tahay dhimasho. “Ruuxa dambiga galo waa midka dhimanayo” (Yexesqeel 18:4). Aqbaarta wanaagsan ayaa ah in jacelaanshada Ilaahey ay na dabagaleyso ingaa si markaas naloogu keeno badbaado. Ciise wuxuu sheegay Ujeedadiisa in ay aheyd “si loo raadiyo iyo loo badbaadiyo waxa lumay” (Luukos 19:10), iyo wuxuu ku dhawaaqay Ujeedooyinkiisa uu gaaray goortii uu ku dhintay istilaabka ee ay la jiraan erayada, “way dhammaatay!” (Yooxanaa 19:30).
Lala haanshaha xiriir sax ah Ilaahey waxay ku bilaabataa ogaanshaha dambigaaga. Waxaa xiga u qirashada qashuucsan ee dambigaaga ee Ilaahey (Ishacyaah 57:15) iyo go’aaminta lagu dayacayo dambiga. “Iyada oo la jirto wadnahaaga oo ah in aad aaminsantahay iyo cudurdaar looga dhigay, iyo waxay la jirtaa afkaaga in aad qiratay iyo badbaado ay tahay ” (Rooma 10:10).
Toobad keenkaan waa in ay la jirtaa rumeysi – gaar ahaan, rumeysiga dhimashada hurista Ciise’ iyo tayada sarakicida mucjisada ee Isaga uu noqdo Badbaadiyahaaga. “Hadii aad afkaaga ku qirato, ‘Ciise in uu Ilaahey yahay,’ iyo aad wadnahaaga ku aaminto in uu Ilaahey dhimashada ka soo nooleeyay, waad badbaadeysaa” (Rooma 10:9). Qeybo kale oo badan iyo mareenada ka hadlo muhiimada rumeysiga, sida Yooxanaa 20:27; Falimaha Rasuulada 16:31; Galatiya 2:16; 3:11, 26; iyo Efesos 2:8.
Si sax ula socoshada Ilaahey waa arin jawaabtaada ah oo waxa Ilaahey uu ku sameeyay matalaadaada. Wuxuu soo diray Badbaadiyaha, wuxuu uhuray si uu dambigaaga kaaga qaado (Yooxanaa 1:29), iyo balanqaad ayuu kuu sameeyay Isaga: “Qof walba ee u yeera magaca Ilaahey waa la badbaainayaa” (Filimaha Rasuulada 2:21).
Muuqaal qurux badan oo toobad keenka iyo cafiska waa u qashuuca wiilka aabaha (Luukos 15:11-32). Wiilka yar wuxuu ku lumiyay naxariistii aabihiisa dambi ceeb badan (aayada 13). Markuu ogaaday qalad sameyntiisa, wuxuu go’aansaday in uu ku laabto guriga (aayada 18). Wuxuu qiyaasay in uu san markale tixgelineynin wiilka (aayada 19), laakin wuu qaldanaa. Aabaha wuxuu jecelyahay mucaaradka soo noqday si badan oo daa’inta ah (aayada 20). Dhammaan waa la cafiyay, iyo dabaaldag sababay (aayada 24). Ilaahey wuu wanaagsanyahay in uu haysto balamihiisa, oo ay ku jiraan balanta cafinta. “Ilaahey wuxuu ku dhawyahay xikmada jabtay iyo wuu badbaadiyaa kuwa ay burburisay ruuxa” (Sabuuradii 34:18).
Haddii aad rabtid in aad Ilaahey si sax ah ula socotid, halkaan tusaalaha docada. Xasuuso, adigoo dhahayo docodaan ama doco walba oo kale kuma badbaadineyso. Kaliya waa aaminaada Masiixiga ee kaa badbaadin kara dambiga. Docodaan waxay si fudud uga fogtahay waddada loogu muujinayo Ilaahey rumeyntaada Isaga iyo u mahadceli Isaga oo badbaadintaada ah. “Ilaahayow, waan ogahay in aan dambi kaa galay Adiga iyo waxaan istaahilaa ciqaab. Laakin Ciise Masiixi ayaa dambiga aan istaahilay qaatay si markaas dhinaca rumeyntiisa iyadoon ku jirto layga cafin karo. Aaminaadeyda adiga ayaan kugu meeleeyay ee badbaado ah. Waad ku mahadsantahay naxariistaada cajiibka ah iyo cafiskaaga—naxariista nolosha daa’inka! Aamiin!"